Baarlamaanka oo hakiyay wareysiyo shaqo oo lala yeelan lahaa sarakiil ku biiraya NCIC – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Baarlamaanka oo hakiyay wareysiyo shaqo oo lala yeelan lahaa sarakiil ku biiraya NCIC
Golaha sharci dejinta ee dalka ayaa maanta dib u dhigay wareysiyo uu doonayay inuu la yeesho saraakiil soo codsaday inay ka mid noqdaan howlwadeenada ugu sareeya ee guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka ee NCIC.
Karaaniga baarlamaanka Michael Sialai ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in qorshuhu uu ahaa in waxyaabo badan oo dhanka shaqada ah la weydiiyo ilaa iyo 54 qof.
Hasa ahaate amar jimcihii ka soo baxay maxkamada sare ee dalka ayaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan iskuduubnaanshiyaha kenyaanka howshaasi ka hor istaagay.
Go’aanka maxkamada ayaa yimid kadib dacwad uu u gudbiyay Mr. Okiya Omtatah oo ka mid ah shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo xuquuqul aadanaha.
Garsoore Wilfrida Okwany ayaa tixgelisay codsigii Omtatah oo ku doodayay in baarlamaanka uunan awood dastuuri ah u lahayn inuu su’aalo weydiiyo sarakiisha soo gudbiyay codasiyada ay ugu biirayaan NCIC maadaama taasi ay tahay shaqada guddiga adeegga dadweynaha ee PSC.
Dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Mr. Joe Mucheru iyo dhigiisa maaliyadda Henry Rotich ayaa lagu wadaa inay berri oo talaado ah hor tagaan baarlamaanka si su’aalo looga weydiiyo fadeexad la sheegay in lagu lunsaday 2.5 bilyan oo shilin.
Fadeexadaasi ayaa laga soo tabiyay wakaaladda dowlada dhexe u qaabilsan arrimaha xeyeysiinta ee (GAA).
Guddoomiyaha guddiga baarlamaanka ee warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ,William Kisang ayaa hoosta ka xariiqay in marka ugu horeysa Mr. Mucheru uu ka soo hormuuqan doono.
Sido kale guddigan ayaa u yeeray xoghayayaasha isgaarsiinta iyo maaliyadda ee kala ah Fatuma Xirsi iyo Kamau Thuge.
Sannadkii 2015-kii ayay ahayd markii waaxda GAA ay dhamaan wasaarada
← 5 ka mid ah ardayda sameynaya imtixaanada KCSE-da oo loo diiday inay sii wataan
Madaxweyne Soomaaliya oo soo dhoweeyay go’aanka cunaqabateynta looga qaaday Eriteriya. →